मार्क जुकरबर्गको त्यस्तो स्टायटस जसले एकै दिन २५ अर्ब डलर घाटा पार्‍यो :: PahiloPost
मार्क जुकरबर्गको त्यस्तो स्टायटस जसले एकै दिन २५ अर्ब डलर घाटा पार्‍यो
फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले बिहीबार आफ्नो फेसबुकमा एउटा लामो स्टायटस पोस्ट गरे।
भोलिपल्ट जब अमेरिकाको सेयर बजार खुल्यो, त्यही स्टायटसको प्रभावका कारण फेसबुकको सेयर भाउ निरन्तर ओरालो लाग्दै गयो। लगानीकर्ताहरुले झण्डै २५ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाए। शुक्रबार बजार बन्द हुँदासम्म फेसबुकको सेयर ४.२ प्रतिशत अङ्क घटेको थियो।
के थियो त त्यो स्टायटस जसले फेसबुकलाई यति ठूलो असर पार्‍यो?
उनले चानचुने कुरा लेखेका थिएनन्, अर्बौँको प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकमा आउने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको घोषणा थियो त्यो। उनले लेखेका थिए- फेसबुकको न्युजफिडमा अब मिडिया कम्पनीका न्युज हुने छैनन्। तपाईँका साथीभाइ र परिवारको पोस्टलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
तत्काल घाटा भए पनि दीर्घकालमा यसले कम्पनीलाई फाइदै गर्ने विश्लेषण विज्ञहरुले गरेका छन्।
क्वार्टजमा पाउल स्मालेराले त यसलाई ड्रग डिलरको पुरानो ट्याक्टिकसँग तुलना गरेका छन्। उनको विश्लेषण छ- ड्रग डिलरले ओभरडोज दिन थाल्यो भने मृत्यु हुने भएकोले बरु डोज घटाउँदै लग्ने गर्छ। फेसबुकबाट दिक्क भएकाहरु पनि छाडेर गए भने फर्कन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले डोज घटाएर त्यसैमा रहेर रमाउने वातावरण बनाउन जुकरवर्गले यो प्रयास गरेका हुन्।
जुकरबर्गले लेखेका छन्- यो परिवर्तन रोल आउट गर्दै गएपछि तपाईँले बिजनेसहरु, ब्रान्डहरु र मिडियाका पब्लिक कन्टेन्टहरु कम देख्न पाउनु हुनेछ। र तपाईँले देख्नुहुने पब्लिक कन्टेन्ट स्टायन्डर्डको हुनेछ, यसले मानिसहरु बीच अर्थपूर्ण संवादलाई बढावा दिनेछ।
त्यसो भए के अब तपाईँले फेसबुकमा ‘भगवान शिवलाई एक लाइक गर्नुस्’ लेखिएका विज्ञापन र ‘आइफोन १० उपहार पाउन यो पोस्ट सेयर गर्नुस्’ लेखिएका पोस्टहरु देख्नुहुने छैन त?
हेर्न बाँकी छ।
तर तपाईँले पहिलोपोस्टको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छ भने यस्ता समाचार तपाईँले फेसबुकमा देख्न पाउनु हुने छैन। यदि तपाईँको कुनै साथी वा आफन्तले फेसबुकमा सेयर गरेका रहेछन् वा कमेन्ट गरेका रहेछन् भने मात्रै तपाईँको फेसबुकको न्युजफिडमा त्यो देखिनेछ। यसले लाखौँ लाइक भएका र लाइकका लागि सयौँ डलर खर्च गरेका फेसबुक पेजहरु पनि प्रभावित हुने पक्का छ।
मार्क जुकरबर्गको त्यस्तो स्टायटस जसले एकै दिन २५ अर्ब डलर घाटा पार्‍यो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।